Rita, Writing for My Sake!: Nice Day !
Posted by Rita at 9/03/2009 10:05:00 PM
Notting Hill နဲ့Pretty woman ဇာတ်ကား တွေကို အရူးအမူးနှစ်ခြိုက်မိခဲ့တယ်အစ်မရေ ဂျူလီယာရောဘတ် ကို အသေကြိုက် Erin Brockovich တို့ My best friend's wedding တို့Run away bride , the Closer အဟဲ သူ့ကားတွေအကြောင်းထိုင်ပြောချင်လာပြီ
မိန်းမမို့ ညဏ်နီညဏ်နက်တွေထွက်တယ်ဆိုတာတော့ မသိ
အမကေ ပြောဖူးတာ ခေါင်းဆောင်အားလုံးသာ မိန်းမတွေဆို စစ်ပွဲတွေ တော်တော်နည်းပြီး ခုထက်ငြိမ်းချမ်းချင်ချမ်းမှာတဲ့ .. ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာ
ကောင်းသောနေ့ အများကြီးပိုင်ပါစေ ..
Gone with the wind ရုပ်ရှင် DVD အခွေက အခုဆိုရင် ဈေးပေါမှ ပေါပဲ ရီတာရေ။ ရုပ်ရှင်လည်း အရမ်းကောင်းတယ်ဗျ။
စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်? နောက် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေ ကြည့်ဖြစ်ရင် လက်တို့လိုက်မယ် ရီတာ
စလုံးရောက်မှ ကွန်ပျူတာ လက်က မချနိုင်ဖြစ်နေတာ
တစ်ခုခုဆို google ပဲ ဟိုစာဆို နည်းနည်းဖတ် ဒီဟာဆို နည်းနည်းဖတ်
နည်းနည်းတွေစုပြီး အများကြီးကလည်း ဖြစ်မလာ။
ပြောပုံက ကျန်တဲ့ အချိန်တွေဆို ကျေးဇူး မတင်ဘူး ဆိုတဲ့ အပေါက်။
သုံးလုံးနဲ့ တစ်တောင်ရယ်။ ငါစိတ်ညစ်တယ်။
ကိုယ်လဲ"လေရူးသုန်သုန်" စာအုပ် လိုချင်လိုက်တာ
ရီတာကအ နှစ်နှစ်ဆယ်ကားတွေပြန်ကြည့်ချင်တာလား။ ကိုယ်တော့အဲဒီကားတွေအလွတ်တောင်ရနေပေါ့။
Captain Corelli's Mandolin (2001)ကြိုက်လား?
Penélope Cruz, John Hurt, Nocolas Cage ပါတယ်လေ
ကိုယ်တော့ တနှစ်တခေါက်လောက် ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကြိုက်တယ်
ဒီကလည်း နာမည်လေးတွေ့တာနဲ့ လူကို မတွေ့တွေ့အောင်ရှာခဲ့တာပါနော်
လေရူးသုန်သုန် တဲ့... ပြန်ဖတ်ချင်လိုက်တာ...
ညီမလေး ရီတာ... Diane Lane ပါတဲ့ Under the Tuscan Sun ဆိုတဲ့ကား ရှာကြည့်လိုက်ပါ.. သိပ်ကောင်းတယ်... အထူးသဖြင့် ပြောတဲ့စကားတွေ သုံးတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ သိပ်ကောင်းတယ်...။
ကြည့်ပြီရင လာဆွေးနွေး အုံး
မီး ကတော့ ကြည့်တိုင်း ငိုာပဲ
တစ်ရှုးဗူး ယူထားတယ် အနားမှာ
ခုရည်းစားက အဲ့ မင်းသား ryan gosling နဲ့ တောင် ခတ်ဆင်ဆင်ရယ်
P.S I love you လေ
gerard butler နဲ့ hilary swank လေ
ကိုယ်ကတော့ အသည်းနုတဲ့ ကောင်မလေး ဆိုတော့ ကြည့်ရင်းငိုတယ် ဟိဟိ